अर्थ /बाणिज्य – Krazy NepaL
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार (आज) नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। आइतबार तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको सुन सोमबार स्थिर रहेर आज भने पुनः १ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो छापावाल प्रतितोला प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १३ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला १३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। लामो समयको कोरोना महामारी र लकडाउन पछि ह्वात्तै बढेको सुन चाँदीको मूल्यमा पछिल्लो समय थोरै घट्बढ् हुने गरेको छ।
काठमाडाैं, २० माघ ।कोरोना कहरकै कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकप्रिय राइड शेयरिङ प्लेटफर्म ‘पठाओ’ भने सबैका लागि रोजगारीको माध्यम बनिरहेको छ । पठाओले राइडरका लागि आधारभूत तालिम अनलाइन मार्फत नै सञ्चालन गरी पार्ट टाइम तथा फुल टाइम जबको अवसर प्रदान गरिरहेको पठाओ नेपाल प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कोरोना कहरअगाडि कार्यालयमै सञ्चालन हुँदै आएको तालिम हाल स्वास्थ्य सुरक्षाको सावधानी अपनाउन अनलाइन मार्फत सञ्चालन गरिएको हो । कोरोनाको समयभन्दा अगाडि दैनिक सय राइडरले आधारभूत राइडर तालिम लिएर पठाओ सेवा सुरु गर्ने गरेकोमा अहिले दैनिक २ सय राइडर पठाओमा जोडिँदै आएको पठाओ नेपाल प्रालिका क्षेत्रीय निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातले बताएका छन् । पठाओमा कसरी जोडिने ? त्यसका लागि तपाईं एकपटक बानेश्वरमा रहेको पठाओको कार्यालयमा
महँगोमा किनेका हरुलाई धेरै घाटा आज पनि नसोचिने गरि घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । आज सुनको मुल्य प्रतितोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो दिन सुनको मुल्य प्रतितोला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मुल्य आज प्रतितोला ९२ हजार ४ सय कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको मुल्य प्रति तोलाको रु ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै चाँदीको मुल्य भने प्रति तोला रु १२ सय ६० रुपैयाँमा कोरबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यो नि पढ्नुहोस् सुत्ने कोठा नितान्त व्यक्तिगत स्थान हो जहाँ सम्पूर्ण आराम प्राप्त हुन्छ ।मानिसहरू जब बेडरुममा पुग्छन् तब उनीहरू तनावमुक्त हुन्छन् । सजिलो तथा सौम्य महसुस गर्छन् । तसर्थ बेडरुम डिजाइनरहरूको सदैव एउटै प्रयास हुन्छ कि यस्तो डिजाइन दिन सकियोस् जहाँ हरेक व्यक्ति एवं परिवारले सहज महसुस गर्न सकून् । यहाँ
“खुसिको खबर: ह्वा’त्तै घ’ट्यो सुन’को र चाँदी’को भा’उ बजार’मा किन्ने’को भिड”
Posted in अर्थ /बाणिज्य, समाचार
कोरोनाको औसधी बनेसं'गै सुनको भाउमा निकै गिराव'ट आयको । आज मंग'लबार सुनको मूल्य 'ह्वात्तै घटेको' छ । का'''रोबार शुरु भएकै प'हिलो दिन ''आइत'बार 'बढेको 'सुनको मूल्य सोम'बार भने स्थिर रहेको थियो । कारोबारको तेस्रो दिन आज सुनको मूल्यमा १ हजार ८ सयले गिरा''वट आएको होे । यो सँगै आज' छा'पा'वाला सुनको मल्य प्रतितो'ला ९२ हजा'र ५ सय कायम 'नेपाल' सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजावी गोल्डकोे मूल्य ९२ हजार रुपैया कायम रहेको छ । आइतवार र सोमबा'र छापावाला 'सुनको मूल्य तोला'मा ९४ हजा'र तीन 'सय रुपैयाँ तो'किएको थियो' ।त्यसैगरी तेजावी' सुन' भने ९३ हजार आ'ठ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतवार सुन प्रतितोला ३ सयका दरले बढेको थियो । यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि ३० रुपैयाले गिरावट आएको छ' । आइतवार र सो'मबार स्थिर रहेको सु'नको भाउ मंगलबा'र तो'लामा' ११८० का दरले का'रोबार भइरहे'को छ । 'अ'घिल्ल
“सुनको मूल्यमा हिजोको तुलनामा सामान्य परिवर्तन , कति छ त आजको बजारभाउ ?”
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइ'तवार सु'नको मूल्यमा हि'जोको तुल'नामा सा'मान्य परि'वर्तन भएको छ । शुक्र'वार प्रतितोला छापा'वाला सुनको मूल्य' ९४ हजार रहेको थियो । आज सुन'को ३ सयले बृद्धि भई प्रतितो'ला छापा'वाल सुन ९४ हजार ३ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवासयी महासंघले जनाएको छ । आज तेजावी सुनको मू'ल्य ९३ हजार ८ सय रहेको छ । तर आइ'तवार चाँदी'को मूल्यमा भने स्थिरता छाएको छ । गत कारोबार दिन शुक्र'वार प्रति'तोला चाँदी'को मूल्य १ हजार २ सय १० मा कारो'बार भए'को थियो । भने आज प'नि त्यहि मू'ल्य कायम भइ कारोबार भइरहेको महा'संघले जनाएको छ ।
“इति’हास मै पहि’लो पटक सुन’को मूल्य यती धेरै’ले ह्वात्तै घ’ट्यो, हेर्नुहोस प्रति’तोला कति ??”
काठमाडौं , मंसिर । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ । आज प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेर छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अघिल्लो दिन तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
शुक्रबार सुनको मुल्यमा निकै गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचॅादी व्याबसायी महीसंघको अनुसार आज '"छापावाला सुन'"को मुल्य प्रति तोलामा रु ४०० घटेर प्रति तोला ९४ हजारमा कारोबार भएको छ । बिहिबार '"छापावाला सुन"को कारेबार ९४ हजार ४ सयमा कारोबार भएको सुन चॅादी महासंघले जनाएको छ त्यसै गरी शुक्रबार "'तेजावी सुन'"को मुल्य ९३ हजार ५ सय रहेको छ । त्यसै गरी शुक्रबार "चॅादी'को मुल्य ५ रुपैया घटि प्रति तोला १२सय १५ रुपायामा कारोबार भएको नेपाल सुनचॅादि व्याबसायी माहासंघले जनाएको छ ।। ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;यस समाचारको पुरा भिडियो तलको लिंकमा रहेको छ;;;;;;;;;;;;;;;;
“मोटरसाइकल पारखीहरुको लागि हिरोले ल्याउने ३०० सीसी सेग्मेन्टमा नयाँ एड्भेञ्चर बाईक यस्तो छ छन् फिचर”
Posted in अर्थ /बाणिज्य, बिज्ञान प्रबिधि, मनोरंजन
हिरो मोटोकर्पले एक्सपल्स २०० को सफलतापछि ३०० सीसी सेग्मेन्टमा पहिलो मोटरसाइकल ल्याउने भएको छ । कम्पनीले ल्याउने ३०० सीसीको मोटरसाइकल एड्भेञ्चर टुरर हुने छ । एड्भेञ्चर मोटरसाइकलको बढ्दो लोकप्रियतामा आफ्नो स्थान खोज्दै आएको हिरोले ल्याउने नयाँ मोटरसाइकलले नेपाली बजारमा उपलब्ध थुप्रै एड्भेञ्चर मोडलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । भारतमा केटीएम ३९० सँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्न कम्पनीले नयाँ मोटरसाइकल ल्याउन लागेको जनाएको छ । नयाँ मोटरसाइलको अपूर्ण प्रोटोटाइप भने कम्पनीले हिरो ग्लोवल २०२० मा सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीले नयाँ एड्भेञ्चर मोटरसाइकलमा सिंगल सिलिण्डर, लिक्वीड कुल्ड इन्जिन प्रदान गर्ने छ । उक्त इन्जिनले ३० बीएच भन्दा बढी पावर प्रदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म हिरोले बनाएका सबै मोटरसाइकलको तुलनमा यसको पावर धेरै हुने छ । यसको पुष्टी भने कम्पनीले गरिसकेको छैन ।कम्पनी
“खुसिको खबर :सुनको भाउ फेरी ओरालो लाग्यो सुन किन्नेको भिड “
काठमाडौं । बुध'बार सुनको भाउ घटे'को छ । तिहार अगाडि कात्ति'क २८ गते प्रति'तोला ९५ हजार २०० मा कारो'बार भएको सुन एक सय रुपैयाँले घटेर बुधबार (आज) ९५ हजार १०० मा कारोबार भईरहेको छ । तर, बुध'बार नेपाली बजा'रमा चाँदीकाे भाउ भने बढे'को छ । तिहार अघि प्र'तितोला १२२० मा कारोबार भएको चाँदीको भाउ बुधबार (आज) ३० रुपैयाँले बढेर १२३० मा कारोबार भइरहेको छ । तिहार बिदा सकिएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार'बाट सुन'चाँदीको मूल्य तोक्न सुरु गरे'को हो ।
“देशमा नै केही गर्न चाहाना हुनेहरुको मुख्य आकर्षण “केशर” खेती किलोको नै १० लाख”
Posted in अर्थ /बाणिज्य, बिज्ञान प्रबिधि, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
प्रति किलो १० लाख रुपैयाँ पर्ने उच्च मूल्यको' जडीबुटी केशर उत्पादन हुन थालेपछि कृषक उत्साहित भएका हुन् । जौवारी मल्टी परपोज एग्री''कल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टरले इलाम'को माइजोगमाई गाउँपालिका–६ को थुम्केडाँडा र जौवारी क्षेत्रमा सामूहिकरुपमा केशरको खेती सुरु गरी विस्तार गरेको छ । प्रदेश नम्बर –१ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम 'रानाले उच्च पहाडी क्षेत्रमा केशरको विस्तार गर्न जरुरी भएको बताए । थोरै मात्रामा हिउँ र तुषारो पर्ने एक हजार ५०० देखि दुई हजार ५०० मिटरको उचाइ केशर खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । परीक्षणका' रुपमा लगाइएको केशर विस्तारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने औंल्याइएको छ । केशर उत्पादनका लागि'' धेरै फूलको आव'श्यकता पर्दछ' । फूलभित्रको रा''तो लुर्का संकलन ग'री सुकाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ । करिब डेढ लाख सुगन्धित फूलबाट